iOS 15 uye iPadOS 15 zvave zvinoshungurudza vashandisi | IPhone nhau
Iwe munguva pfupi yapfuura wakakwanisa kutarisa nesu panguva yeWWDC21 kuvhurwa kweIOS 15 uye iPadOS 15, masisitimu anoshanda enhare ekambani yeCupertino ayo, segore rega, anotanga nguva yavo yekuyedza pakati paJune naSeptember. Nekudaro, mushure memakore ekuchinja kukuru, vamwe vashandisi vanoratidzika kunge vanoda chimwe chinhu chinotyisa.
Ruzhinji rwevashandisi runotaura kusagutsikana kuzere nezvinhu zvitsva zveIOS 15 uye iPadOS 15, izvo zvinogona kunyadzisa zvachose. Nekudaro, iyo Cupertino kambani inyanzvi yekugara ichisiya zvakanakira kwekupedzisira, zvirinani kana tichitaura nezve zvakavanzika zvinoshanda kana zvehunyanzvi zvigadzirwa, hauna kugutsikana neIOS 15 futi?
Munguva pfupi yapfuura shamwari dze TengesaiSell vakaita ongororo yevanopfuura vanoshandisa zviuru zvitatu maererano nezve kuratidzwa kweIOS 3.000 uye iPadOS 15 vachinyatsoteerera nhau dzavo. Zvisinei, Vanopfuura makumi mashanu muzana evashandisi vakaongororwa vakataura kuti kunatsiridzwa kwacho "kwakanyanya" kana "hakufadzi zvachose, nepo 50% ichiti vaifarira zvine mwero. Nekudaro, vangangoita 20% vakagutsikana kwazvo nenhau dzakapihwa nekambani yeCupertino. Kamwe pakatsvuka-ruoko, mabasa anonyanya kushamisa evashandisi anga ari kusanganisira makadhi ekuzivisa mukushandisa chikwama pamwe nekuvandudzwa kweSpotlight. Kubva pano pfumo richitsigira Spotlight, iri muSpain ibasa rinotukwa nevashandisi uye rinogona kuita kuti zuva rako nezuva rive nyore.
Kune rimwe divi, mamwe ese mashandiro anoita kunge aenda zvachose asingaonekwe, nepo ruzhinji runotenda kuti Apple yaifanira kunge yaisanganisira mawidgetti anofambidzana, iyo Nguva dzose-pa-Ratidza kana kubatanidzwa kwezvikumbiro zvinoda zvakanyanya seFinal Cut Pro pane iyo iPad. Izvi zvinowedzera kukakavadzana kwakasimba kwakakomberedza zita reiyo ramangwana iPhone. Nekudaro, uye kutaura chokwadi, izvi zvishoma zvitsva zvinobatsira kugadzirisa iyo Inoshanda Sisitimu uye kugadzirisa izvo zvatovepo, hazvina kunaka here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » iOS 15 uye iPadOS 15 zvave zvichishungurudza vashandisi
Ricardo Alexis Marin akadaro
Rinondiyeuchidza nezve mashoma mashoma maficha mu iOS 6 payakabuda
Pindura Ricardo Alexis Marin
Chokwadi, ini ndaitarisira kuti atomic blaster, kana teleporter. Iwe haugone kuisa zvese mukati megore rega uye kuzviita zvakasiyana nguva dzese. iOS 15 inounza anopfuura zana zana ekuvandudza muhuwandu, mamwe acho anonakidza kwazvo. Vazhinji vanongoona aesthetics vasina kufunga kuti pamwe zviri nyore kuti zvese zvinoshanda mushe uye nenzira kwayo uye kuti kunyorera kunatsiridzwa kuitira kuti vabudirire.
Isu tanga tichishandisa iwo mamwe ma icon kwemakore manomwe ndosaka ndichishandisa jailbreak zuva iro jailbreak rinomira kuvapo musi iwoyo wandinorega kushandisa iPhone
Unoona zvandiri kureva here? "Zuva randisingakwanise kuchinja mifananidzo, ndakaisa pasi iPhone." Ndirwo rudzi rwevanhu vanotonga mhando yefoni nezvidhori zvayo, kana vachizoichinja gore rega rega kupasa uye kana zvisiri, hazvina basa.
Izvozvi zvave kugona kuyedza Amazon Luna pasina kukokwa